iCloud, mere site Apple, awade online nchekwa maka Apple ọrụ ka mmekọrịta data ka ígwé ojii. Na a otu Apple ID, ị nwere mfe ohere ka data n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-iPhone onye ọrụ, ị pụrụ ịmata otú mmekọrịta iPhone na iCloud. Ebe a, na isiokwu a, ga-amasị m na-egosi gị nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Easy Nzọụkwụ ka mmekọrịta iPhone ka iCloud
Nzọụkwụ 1. Site na Ihuenyo, na-aga Ntọala ma họrọ iCloud.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Akaụntụ na-aba gị Apple ID na paswọọdụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị gị Apple ID mgbe ahụ ị nwere ike ya mgbe ahụ ị ga-banye.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a melite gị iCloud nchekwa atụmatụ. Mbụ ị na-akpaghị aka na-free 5GB iCloud nchekwa nke bụ ezuru mgbe ị mmekọrịta ọhụrụ iPhone na iCloud. Ị nwere ike kwalite ka 10GB, 20GB, ma ọ bụ 50GB nke nchekwa maka ihe kwa afọ ego.
Nzọụkwụ 4. Mgbe nke a, enweta na Emela bọtịnụ. Na ị na-laghachiri iCloud ntọala.
Nzọụkwụ 5. Nịm gị iCloud Mail akaụntụ nhọrọ.
Gị iCloud e-mail adreesị-egosi na ala nke na Akaụntụ ihuenyo.
Gị iPhone ga mmekọrịta ya afọ ojuju. Site na ndabara na mmekọrịta Notes Njirimara gaghị tụgharịa na gwụla ma gị Apple ID bụ ihe @ me.com ma ọ bụicloud
Nzọụkwụ 6. Ugbu a jikota gị iPhone na iCloud. Enweta ihe ọ bụla mgba ọkụ na-atụgharị ma ọ bụ gbanyụọ iCloud mmekọrịta n'ihi na ọmụma.
Ka ihe atụ, ka mmekọrịta gị ana-akpo n'etiti gị iPhone, Mac, na iPhone, pịa ngbanwe na Gbanye. Ka ịgbanyụọ iCloud syncing maka ncheta, enweta Nchetara ịgbanwee gaa na Gbanyụọ. Photo Stream na Documents na Data nwere dị iche iche meziri na otutu nhọrọ.
Nzọụkwụ 7. Lelee gị iCloud nchekwa
Ị nwere ike inyocha gị iCloud nchekwa site na isoro ndị a:
Site na Ihuenyo, enweta Ntọala akara ngosi.
Open Nchekwa & ndabere.
• Open Jikwaa Nchekwa.
Ị ga-nyochaa ohere ji gị backups. Ị nwere ike ihichapụ backups maka iPhone ị na-adịkwaghị eji ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta iCloud ohere nchekwa.
• Nhọrọ: I nwekwara ike inwe ike ma ọ bụ gbanyụọ iCloud backups gị iPhone si data.
E wezụga syncing iPhone ka iCloud, ị nwekwara ike ndabere iPhone ka iCloud.
Ọzọkwa Reading: mmekọrịta iPhone n'elu WiFi
E nwere ọtụtụ ụzọ nke-enyere gị aka mmekọrịta gị iPhone n'elu WiFi site nnọọ Ijikọ iPhone na Wi-Fi Network. Ị nwere ike mmekọrịta gị iPhone ka iTunes na-akpaghị aka ma ọ bụ aka n'elu Wi-Fi. Ị na-ahọrọ gị ntọala maka Wi-Fi syncing otú ahụ dị ka ị na-eme n'ihi na syncing n'elu a USB.
Iji gbanye Wi-Fi syncing, gị iPhone kwesịrị ka a jikọọ kọmputa gị. Ozugbo Wi-Fi syncing na agbanwuru, ị nwere ike mmekọrịta gị iPhone mgbe ọ bụla na ọ bụ na otu netwọk Wi-Fi dị ka gị na kọmputa.
Iji gbanye WiFi syncing:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Open iTunes. N'okpuru NGWAỌRỤ, pịa gị iPhone, wee pịa Summary.
Nzọụkwụ 3. Họrọ mmekọrịta gị na iPhone n'elu Wi-Fi.
Nzọụkwụ 4. Kwupu gị iPhone na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ị kwụpụ, gị iPhone-aga n'ihu na-egosi na iTunes window (n'okpuru NGWAỌRỤ), ma ọ bụrụ na ị pịa idaputa bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ị pịa idaputa button, gị iPhone wepụrụ si iTunes window, ma Wi-Fi syncing anọgide agbanwuru. Gị iPhone reappears na iTunes window oge ọzọ ị na-emeghe iTunes.
Detuo ihe niile si iPhone ka PC
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPhone SMS
1 Pịa Nyefee Blackberry ka iPhone
A Full Guide iji Hichapụ iPhone
> Resource> iCloud> A Full Guide na Olee otú ka mmekọrịta iPhone na iCloud